R.M.D.M: Mangataka ny fanafoanana ny fifidianana monisipaly tamin’ny 27 novambra
vendredi, 06 décembre 2019 18:39
Nanao fanambarana ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (R.M.D.M) ny 05 desambra 2019 « mangataka ny fanafoanana ny fifidianana monisipaly tamin’ny 27 novambra 2019, izay feno hosoka ary handray andraikitra hanao izay tokony ho atao amin’izany amin’ny fitondrana ny raharaha eo amin’ny tomponandraikitra mahefa ara-pitsarana ».
Mamaky bantsilana ny fanovana ny lisitry ny mpifidy nataon’ny CENI ahafahana manao hosoka amin’ny fifidianana, ary hampandaniana kandidam-panjakana ny RMDM ary manamafy fa « ny CENI dia tsy nahaleo tena mihitsy hatramin’izay tamin’ny fanapahan-keviny sy ny asa nataony ».
Nilaza ny RMDM fa « velona ahiahy mafy, satria niaiky am-pahibemaso ny CENI nandritry ny valandresaka tamin’ny mpanao gazety nataon’ny Vice-Président Thierry Rakotonarivo tamin’ny 29 novambra 2019 tamin’ny fanazavany ny momba ny tranga mikasika an’i Pasitera Lala Rasendrahasina ».
Voalazan’ity filoha lefitry ny CENI ity, hoy ny RMDM fa « Efa nifindra trano i Pasitera, ny sefo Fokontany no nilaza taminay ary izahay (ao amin’ny service informatique) no nandray ny fepetra». « Izay fanekena am-pahibemaso ny fanovana ny lisitry ny mpifidy izay no porofo tsy azo lavina mikasika ny fandikana ny Andininy Faha 42 ao amin’ny Lalàna 2018-008 ankoatry ny porofo hafa eo am-pelatananay ».